यो पनि पढनुहोस् – Himalaya Television
१ जेठ २०७८ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सपथका क्रममा मुलुक र जनताप्रति वफादार रहने ‘प्रतिज्ञा’ गर्न अस्वीकार गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिले सपथ गराउँदै गर्दा प्रतिज्ञा भन्न अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई निर्देशन दिएको समेत देखिएको छ ।...
२८ वैशाख २०७८ काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको उपचारमा अत्यावस्यक मानिएको अक्सिजन अहिले नेपालमा पनि हाहाकार हुन थालेको छ । अस्पतालहरुले धमाधम अक्सिजन अभावमा बिरामीको उपचार गर्न नसकिने घोषणा गर्न थालेका छन् । काठमाडौं जोरपाटीको केएमसी अस्पतालले त बिरामी बाहिर...
अस्पतालहरुमा अक्सिजनको हाहाकार, कोरोना संक्रमितलाई बेड पाउन यस्तो मुश्किल (भिडियो रिपोर्टसहित)
२७ वैशाख २०७८ दाङ । कोरोना संक्रमितले उपचारका लागि अस्पतालमा बेड पाएका छैनन् । बेड पाएका गम्भीर संक्रमितले पनि अक्सिजन पाएका छैनन् । संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनमा राज्यले पनि ध्यान दिन सकेको छैन । यस्तोमा दाङका निजी अस्पतालले अक्सिजन...
२६ वैशाख २०७८ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकले लापरबाही गरेका अहिले कोरोना भाइरस संक्रमण तिव्र गतिमा फैलिएको आरोप लगाउनुभएको छ । अमेरिकी टेलिभिजन च्यानल सीएनएनलाई आज दिउँसो दिएको प्रत्यक्ष अन्तर्वार्तामा ओलीले अहिले कोरोना संक्रमण तिव्र भए पनि...
अध्यादेशबाट शासन गर्ने ओलीको चाहना : देशका लागि खतरनाक (भिडियो रिपोर्टसहित)
२६ वैशाख २०७८ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा अध्यादेशको मोह देखिएको छ । संसद अधिवेशनमा कानून बनाउन भूमिका नखेल्ने तर अधिवेशन अन्त्य हुने बित्तिकै अध्यादेश ल्याउने गर्नुभएको छ । पछिल्लो पटक पनि उहाँले ८ आठ वटा अध्यादेश जारी...
शरीरमा अक्सिजनको कमी भएको कसरी थाहा पाउने ? कमी भए के गर्ने ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
२५ वैशाख २०७८ काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कमी हुँदा ज्यानै जाने गरेको छ । कोरोना संक्रमण भएका व्यक्तिको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम भएको कसरी थाहा पाउने ? शरीरमा अक्सिजनको कमी हुन नदिन के गर्ने ? कोरोना...